Wasaarada Arrimaha Dibada oo qorsheyneysa in ay Isbedel balaaran ku sameyso dhamaan Safaaradaheeda Dalalka shisheeye – idalenews.com
Qoraal ay Wasaarada arrimaha dibeda Soomaaliya u gudbisey dhamaan danjirayaasheeda safaarada dowlada Soomaaliya ku leedahay wadamada caalanka ayaa ku amartey inay si degdeg ah ku soo galayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si baa la yiri looga hadlo qorshe ay damacsan tahay dowladda Federaalka Soomaaliya oo ah iney isbedel ku sameyso safiiradeeda dibada.
U yeeristaan ayaa ka dambeysey ka dib markii Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu balanqaadyo iyo heshiis hoose la galey xildhibaanada beelaha kala duwan ee wadey mooshinka loogu soo horjeeday xukuumada Ra’iisul Wasaare Saacid kuwaasoo ka cabanaayey in dowladu aysan si siman oo cadaalad ku jirto beelaha ugu qeybin jagooyinka muhiimka ah ee dalka.
Wasaaradda Arrimada dibada ayaa iyadu ku gaabsatey in sababta safiirada loogu yeeray ay tahay iyadoo wasaaraddu qorsheynayso inay dib u habeyn iyo isku shaandheyn ku sameyso safiirada dowladda Soomaaliya u fadhiya dalalka caalamka ee ay Soomaaliya safaaradaha ugu furan yihiin, waxaana la sheegay in qaar badan oo ka mid ah safiirada ay weyn-doonaan xilalkooda, halka kuwo kalena la isku shaandheyn doono.
Warar aan la hubin balse isa soo taraaya ayaa sheegaaya in la bedelo doono safaarado dhowr isla markaasina safaaradaha dalka lagu soo koobi doono oo kaliya ilaa 29 safaaradood. Safiirkii in ka badan muddo 4 sano ahna ay suurtogal tahay in safaarad kale loo magacaabo ama laga qaado xilkaas. halka danjirayaasha in ka yar 4 sano laga yaabo in ay sii haayaan xilkaas ama meel kale loo bedelo.
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa horey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qunsuliyadaha iyo diblomaasiyiinta kale ee ka shaqeeya safaaradaha ay Somalia ku leedahay dalalka caalamka qaarkood, kuwaasoo lagu sameeyey dib u habeyn sababtay in qaarkood ay shaqada waayaanm halka qaar kalena la kala bedelay.